China Inkqubo yokuGqithisela abaSebenzi ngokuGqwesileyo ngobushushu kunye nabathengisi | SHUANGLIANG ECO-AMANDLA
Inkqubo yokuGqithisela ubushushu ePhakamileyo
Global Mainstream Ubushushu umzimba kunye noxinzelelo Umvelisi wenqanawa
Ukhuseleko, ukuthembeka, ukusebenza ngokukuko okuphezulu- Gxila kuTshintsho lobushushu
Icandelo lokuDlulisa ubushushu eShuangliang elikhethekileyo kwi-R & D, uyilo kunye nokuyila iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zokutshintshisa ubushushu; bonelela ngenkqubo yonke enje ngokubala okufudumeleyo, uyilo loomatshini kunye namandla, ubumbeko kunye nolawulo lomgangatho njlnjl kubathengi kwihlabathi liphela.
Iimveliso eziphambili kubandakanya umngxunya onzulu wempundu ukuwelda ubushushu umzimba, i-condenser, i-ORC izixhobo zokutshintshisa ubushushu, ukupholisa icompressor, ukupholisa irhasi ekhethekileyo, umphunga, intsimbi ekhethekileyo ye-TEMA yokutshintsha ubushushu, umphezulu opholileyo, umbhobho wobushushu wokufudumeza, njl.
Sine-Chinese GB A1 / A2 yoyilo lwenqanawa yoyilo kunye nesatifikethi sokuzenzela, i-ASME U1, U2, CRN, CE, KGS & KOSHA, KHK, IBR, EN13445, CU-TR, DOSH, MOM izitifiketi zokuthumela ngaphandle koxinzelelo lwenqanawa emhlabeni.
Sinako welding kungamampunge iintlobo ezahlukeneyo izinto zentsimbi ezifana Titanium, Umzimveliso Base ingxubevange, Cooper, engayi kabini intsimbi, isidlo sangokuhlwa kabini Steel, Aluminium, Low ingxubevange Steel njl
Senze amawaka eziXhobo zokuTshintshiselwa kobushushu zeNokia, iMan Turbo, iKobelco, iAtlas Copco, iHadlor Topsoe, iLinde, iLiquide yomoya, iiMveliso zomoya, iPraxair, iHyundai yobunjineli, ioyile yaseIndiya njl.njl. UMntla Merika, uMzantsi Melika, uMzantsi Korea, iJapan, uMzantsi-mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, iRussia, iBelarus, iKazakhstan njl.njl, kwaye wakhonza iiprojekthi ezinkulu kwizikali zepetrokhemical, ikhemikhali yamalahle, intsimbi, ielektroniki, amashishini emichiza.
Egqithileyo I-Chiller yombane kunye neTekhnoloji yoPompo lobushushu
Okulandelayo: Itekhnoloji yoLondolozo lwaManzi yokupholisa umoya
I-Chiller yombane kunye neTekhnoloji yoPompo lobushushu
Iteknoloji yeLithium Bromide Absorption
Itekhnoloji yoLondolozo lwaManzi yokupholisa umoya